Mamorona borosy Photoshop anao ary alamino ao amin'ny tranombokinao manokana | Famoronana an-tserasera
Misolo tena ny mpanao sariitatra ny borosy iray amin'ireo singa ilaina ho an'ny fanatanterahana ny asanao sary amin'ny fitaovana Photoshop. Ary matetika dia manana olana izy ireo ary mandany fotoana very maina rehefa manandrana mitady ny borosy mety amin'ny asa tian'izy ireo hatao.
Soa ihany fa afaka manao izany ianao mamorona ny borosinao Ary ny tsara kokoa dia azonao atao ny mandamina azy ireo ao amin'ny tranombokinao mandritra ny fotoana ilanao azy ireo. Ka amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny fomba famoronana borosy Photoshop sy ny fomba hanafarana azy ireo.
1 Mamorona borosinao manokana ary alamino ao amin'ny tranombokinao izany
2 Ahoana ny fomba famoronana borosy ao amin'ny Photoshop
3 Safidy hanovana ny safidy borosy ao amin'ny Photoshop
3.1 Safidy fanaparitahana
3.2 Safidy firafitra
3.3 Safidy borosy roa
3.4 Safidy loko mavitrika
3.5 Safidy famindrana
4 Safidy hafa amin'ny famoronana borosy Photoshop
5 Ahoana no fomba hamoronana tranomboky borosy anao
Mamorona borosinao manokana ary alamino ao amin'ny tranombokinao izany
Mba hiasa amin'ny fomba voalamina, ny fahazoan-dàlana aloha esory daholo ireo borosy ireo izay tsy ampiasainao, satria raha manao ny asanao ianao dia ho fantatrao izay mety aminao na tsia esorina.
Tadidio fa afaka mamorona borosy vaovao ary azonao atao koa ny manova ireo efa anananao.
Manomboka amin'ny lamba tsy misy bà vita amin'ny borosy misy anao, manaova marika araka ny itiavanao azy amin'ny volondavenona sy maintyVantany vao vonona, ampiasao ny fitaovana fifantina haka ny marika ary tahirizo ho borosy vaovao izy, safidio ny safidy Edit, farito ny lanjan'ilay borosy ary tohizo ny anarany azy raha te hamantatra ianao avy eo, tsindrio OK ary ho namorona borosy fototra ho an'ny Photoshop ianao.
Izao dia hazavaina ny fomba hanomezana ny borosy toetra ilaina hafa Mba hanomezana endrika sy vokany manokana dia tanterahina amin'ny safidin'ny borosy.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy atao safidio ilay borosy noforonina teo aloha ary mankanesa any amin'ny safidy borosy, kitiho ny "Window-Brush".
Safidy hanovana ny safidy borosy ao amin'ny Photoshop
Safidy endrika mavitrika
Io dia mamela hanao fanovana amin'ny endrika sy haben'ny borosy, koa ny refy sy ny zoro ny tsipika ary ny manodidina ny tendron'ity.
Amin'ny alalany no ahatanterahana ilay borosy marika miparitaka na mifantoka Araka ny tsiron'ny mpanakanto dia azonao atao ny misafidy ny hampandeha ireo famaky roa ho marika marimaritra iraisana.
Mamorona borosy Photoshop miaraka amin'ny endrika manokana, azonao ampiana vokarin'ny famirapiratana, habe, halaliny, sns. amin'ny endriny.
Safidy borosy roa
Miaraka aminy ianao dia afaka miditra borosy iray izay efa notehirizinao niaraka tamin'ny iray hafa izay azonao anaovana fanovana ihany koa, soso-kevitra tsy tokony hitombo amin'ny famoronana ireo borosy roa ireo hatramin'ny miadana ny fitaovana Photoshop.
Safidy loko mavitrika
Ireo borosy ireo manova ny loko izy ireo raha mbola mandroso ny làlana, raha omena ilay safidy "ampiharo amin'ny tendrony" dia hahetsika.
Amin'ny alàlan'ity, azo atao ny mikapoka amin'ny borosintsika toy ny tsy fahalanian-tsika ary mila fahasimbana miharihary. Safidy hafa azo ampiasaina dia azo ampiharina amin'ny borosy mixer, saingy mila fitadidiana RAM be dia be izy ireo, raha tsy misy dia soso-kevitra hialana amin'ny fampandehanana azy.
Safidy paosy borosy
Azo atao ny manova ny fironana amin'ny tendron'ny borosy.
Safidy hafa amin'ny famoronana borosy Photoshop
Tabataba, manasongadina ny sisin'ny lalana
Sombina lena, alaivo tahaka ny vokatry ny watercolor
Ny fifantohana, miasa mba hanomezana vokatra azo avy amin'ny loko (airbrush)
Fiolahana malama sy malama
Rehefa avy namonjy ny borosy Photoshop ianao, afaka misafidy ireo izay hampiasanao betsaka ianao, amin'ireo tianao indrindra na inona na inona antony manosika anao hanao vondrona azy ireo.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa ho an'izay rehetra mampiasa Photoshop ho fitaovana fiasan'izy ireo, dia ilaina tokoa ny mahafantatra ireto torohevitra ireto, nefa koa ary aorian'ny fanaovana ny olana mba hamoronana borosy tsirairay araka izay tiany, afaka mitazona azy ireo milamina, dia ho ilaina amin'ny fampiasana any aoriana; Azonao atao ny mamorona tranomboky anao manokana amin'izany.
Ahoana no fomba hamoronana tranomboky borosy anao
Tsy maintsy tsindrio ny Edit, manager manager ary apetraka ny manager setting. Mandrosoa mankany safidio ny borosy rehetra tianao atambatra ary tsindrio ny "save set". Mitadiava faritra iray ao amin'ny PC-nao, ento any amin'ny folder misy ny "borosy”, Izay ao anaty Photoshop ary hita ao anaty rakitra fisie, Adobe Photoshop, preset, borosy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » borosy » Mamorona borosy Photoshop anao ary alamino ao amin'ny tranombokinao manokana